रमाइलो खेल हो भन्दै १४ वर्षीया बालिकासँग ४९ वर्षीय पुरुषले बनाए लगातार शा’री’रिक स’म्बन्ध, बच्चा बसेपछि फरार ! – Sudursamaj
मुख्य पृष्ठबिश्व/प्रवासरमाइलो खेल हो भन्दै १४ वर्षीया बालिकासँग ४९ वर्षीय पुरुषले बनाए लगातार शा’री’रिक स’म्बन्ध, बच्चा बसेपछि फरार !
रमाइलो खेल हो भन्दै १४ वर्षीया बालिकासँग ४९ वर्षीय पुरुषले बनाए लगातार शा’री’रिक स’म्बन्ध, बच्चा बसेपछि फरार !
Madan | Tuesday September 15, 2020	Comments
काठमाडौं । एक १४ वर्षीया बालिकाको पेटमा ४९ वर्षीय पुरुषले बच्चा बसाएर फरार भएको छ । भारत, छत्तिसगढ राज्यको रायपुर शहरको मोवा क्षेत्रमा एक ४९ वर्षीय पुरुषले १४ वर्षीया ना’बालिग केटीलाई शा’री’रिक, स’म्ब’न्ध राख्दै आएका थिए । बच्चा गर्भवती भएको बेला परिवारलाई सबै कुरा थाहा भयो । ति पुरुषलाई शनिबार साँझ पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । कुरा के भने ति पुरुष आफै दुई बच्चाहरूको बाबु हुन् । उनी सन्तोष मोहल्ला क्षेत्रमा बस्छन् । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
ति पुरुष सन्तोष मोहल्लामा बस्छन् । एक बर्षसम्म उनले बालिकालाई भ्र’मित पारिरहेका थिए । उनले जहिलै खेल्न आउ भन्दै आफ्नो घरमा बोलाउने गर्थे । त्यसपछि कहिलेकाँही चकलेट दिएर, कहिलेकाहिँ अरु चीजहरुमा प्रलोभन देखाएर बालिकालाई आफ्नो वसमा लिने गर्दथे । सुरुवातमा उनले ग’ल’त तरिकाले विभिन्न स्था’नमा छुने गर्थे । यसपछि ति पुरुषले छोरी समान बालिकासँग शा’र’री’क स’म्ब’न्ध राखेको बताइएको छ ।
घ’टना पछि बालिकालाई उनले कसैलाई भनेमा परिवारका सदस्यहरूसहित सबैलाई ख’त्त’म पार्ने जोड दिने गरेका थिए । यसकारण बालिकाले कसैलाई केही भन्न सकिनन् । आफुमाथि भएको उक्त ह’र्कत लगातार सहँदै गइन् । तर हालै बालिकाको अवस्था बि’ग्रँदै गयो । जब उनलाई अस्पताल पुर्याइयो तब बालिकाको पेटमा बच्चा भएको कुरा खुल्न आयो ।
यो सब भएपछि परिवारले सोध्दा, ती बालिकाले सम्पूर्ण घ’ट’नाको बारेमा बताइन् । बालिका अस्पताल र प्रहरीकोमा पुगिन् भनेपछि त्यो पुरुष भागेको थियो । तर उसलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । यस मुद्दामा प्रहरीले पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिरहेको छ । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
कोरोना छिट्टै नियन्त्रण मा आउँछ भन्दै भर्खरै WHO ले दियो यस्तो खुसीको खबर !
Breaking News: अमेरिका ले तोक्यो कोरोना भ्याक्सिन बजार मा आउने मिति ।
युट्युबमा भिडियो हेरेर यी दाजु र बहिनीले जे सिके, थाहा पाउँने जो कोही हैरान !
फिल्ममा २ मिनेटको भुमिका पाउन हिरो सङ्ग सुत्न पर्छ यहाँ
अन्तत भोलि आइतबार देखि टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारी
परिवारलाई मिठो खुवाउने र प्र शस्त पैसा कमाउने उ द्देश्य बोकेर विदेश गएका वि वेक र रे णुका मृ त्यु …
विश्वकै सबैभन्दा अग्लो भवन दुबईको बुर्ज खालिफामा नेपाली झण्डा फहराइदै” September 19, 2020